Erdoğan:”Turkiga kama amar qaato Yurub” – SOOMAALPEDİA
Waxaa qarka u saaran inuu gebi ahaan burburo heshiiskii Midowga Yurub iyo dowlada Turkiga ee la xariiray arrimaha qaxootiga, kadib markii ay EU-da shuruudo ku xireen codsigii dowlada Turkiga oo ahayd in muwaadiniinteeda ay VISUM la’aan ku geli karaan dalalka Yurub.
Midowga Yurub ayaa shuruudo gaaraya illaa 72 qodob ku xiray Xukuumada Turkiga inay soo buuxiso kahor intaan loo fasixin dadka heysta Baasaboorka Turkida inay fiiso la’aan ku yimaadaan wadamada Midowga Yurub, waxaana khilaafka ugu weyn uu hada ka taagan yahay mid kamid ah shuruudahaasi oo ay EU-da uga codsadeen Turkiga inuu wax ka bedalo sharcigiisa la dagaalanka argagaxisada.
EU-da ayaa ku doodaysa in xukuumada Turkida loo baahan yahay inay wax ka bedasho qodobo kamid ah sharciga cusub ee wadankaasi oo dhawaan la ansixiyey, kaasi oo ay dalalka Yurub u arkaan mid dowlada Erdogan si dadaban ay ugu cadaadineyso xisbiyada Mucaaridka ah.
Jawaabta Adag Ee Erdogan
Madaxweynaha dalka Turkiga Tayyib Erdogan ayaa si adag uga jawaabay baaqa ka yimid dhanka Midowga Yurub isagoo sheegay in dalka Turkiga uusan ka amar qaadan EU-da. Yaa awoodaas idiin siiyey? ayuu ku yiri khudbadiisa Madaxweyne Erdogan.
Erdogan ayaa horey u dhaliilsanaa qodobo kamid ah heshiiska ay bishii Maarso magaalada Brussels kuwada gaareen Raysalwasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu iyo hogaamiyayaasha Midowga Yurub oo ku heshiiyey inay iska kaashadaan hoos u dhigida qaxootiga badan ee Yurub soogalaya, iyadoo Turkiga laga caawin doono dhanka xeryaha qaxootiga, ganacsiga iyo isu socodka muwaadiniinta labada dhinac.
Raysalwasaare Ahmet Davutoglu ayaa lagu wadaa inuu dhawaan xilka isaga dego, kadib markii uu xilaaf soo dhexgalay isaga iyo Madaxweynaha. Erdogan ayaa xiligan ku mashquulsan sidii Dastuurka Turkiga loo bedali lahaa oo awooda Xukuumada loo hoos keeni lahaa xafiiska Madaxweynaha.
Tayyib Erdogan ayaa sheegay in sharciga ay dajisteen dowlada Turkiga ee la dagaalanka argagaxisada aan wax laga bedali doonin, isla markaana ay yihiin dowlad madax banaan. Erdogan ayaa wax la yaableh ku tilmaamay isla-weydnida Midowga Yurub iyo baaqooda ah in aysan Turkiga iska difaacin argagaxisada.